Niainga ny sidina vaovao Karthala Airways
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Niainga ny sidina vaovao Karthala Airways
Ny governemanta Comores dia mikendry ny hametraka kaompaniam-pirenena mitondra ny anarana hoe Karthala Airways miaraka amin'ny fanampiana ara-teknikan'ny Air Mauritius. Ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka vaovao dia eo am-panaovana fanamarinana ny mari-pahaizana momba ny Air Operator (AOC). Tsy misy antsipirian'ny sambo na toeran-kendrena azo alaina amin'ity dingana ity.
Karthala Airways dia kasaina ho mpitatitra fandaharam-potoana hipetrahana avy ao amin'ny Prince William International Said Ibrahim International (HAH).
Air Mauritius (MK) dia nanao sonia Memorandum of Understanding (MOU) niaraka tamin'ny governemanta kaomorianina ho an'ny fanomezana fanohanana ara-teknika ny tetik'asa Karthala Airways nihidy farany. Nandritra ny lahateniny nandritra ny AGM an'ny kaomisaria maorisianina ny alakamisy 12 jolay dia nilaza ny Tale Jeneraly Somas Appavou fa vita sonia tamin'ny 14 martsa ny fifanarahana ary eo ambaniny, Air Mauritius dia hanome fanohanana sy fahaizana amin'ny fanombanana sy ny fananganana Karthala Airways. Ny parametera fanombohana dia efa voafaritra ary eo am-panaovana ny mari-pahaizana momba ny Air Operator's Certificate (AOC) izy izao.
Nomena anarana taorian'ny volkano Karthala tao Grande Comore, Karthala Airways dia tetikasan'ny tabilao fanaovana sary hatramin'ny 2006 izay nampidirina voalohany. Ho fiezahana hanao ny zotram-piaramanidina ho zava-misy eo amin'ny sehatry ny asa, mpandraharaha maro hafa no notsaraina tato anatin'ny taona vitsivitsy, ao anatin'izany ny Royal Jordanian (RJ, Amman Queen Alia), saingy tsy nahomby.
Stephane Fouassin, filoha Reunion fizahan-tany miatrika fanamby
Banyan Tree hivarotra ny fananan'i Seychelles amin'ny $ 70 tapitrisa